Ny mamatonalina komandy 4.8.25 dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony | Avy amin'ny Linux
Komandin'ny mamatonalina es mpitantana rakitra ho an'ny rafitra toa ny Unix ary izy io dia klone Commander Norton izay miasa amin'ny maody an-tsoratra. Ny efijery lehibe dia misy takelaka roa izay aseho ny rafi-drakitra.
Izy io dia ampiasaina amin'ny fomba mitovy amin'ny fampiharana hafa izay mihazakazaka eo amin'ny akorandriaka Unix na interface interface. Ny lakilen'ny bokotra dia mamela anao hitety ireo rakitra, Ny bokotra fampidirana dia ampiasaina hisafidianana rakitra ary ny lakilen'ny fiasa dia manatanteraka asa toy ny famafana, fanovana anarana, fanovana, fandikana rakitra sns.
Na dia eo aza ny fanampiana ny totozy Komandy hanamorana ny fikirakirana ny fampiharana.
Komandin'ny mamatonalina Izy io dia manana fiasa toa ny fahaizana mijery ny atin'ny rakitra RPM, miasa miaraka amina endrika fisie mahazatra toy ny lahatahiry tsotra.
Ahitana mpitantana famindrana FTP na mpanjifa FISH protokol ary ao koa ny tonian-dahatsoratra antsoina hoe mcedit.
Ny famoahana ny kinova vaovao "Midnight Commander 4.8.25" dia vao tsy ela akory izay no nanambarana, izay nanovana fanovana sasany, ny lehibe indrindra dia ny fanatsarana ny tonian-dahatsoratra Mcedit ho fanasongadinana ny syntax.
1 Inona no vaovao ao amin'ny Midnight Commander 4.8.25?
1.1 Ahoana ny fametrahana ny Midnight Commander amin'ny Linux?
Inona no vaovao ao amin'ny Midnight Commander 4.8.25?
Ao amin'ity kinova vaovao an'ny Midnight Commander 4.8.25 ity no tena mampiavaka azy mifantoka amin'ny fanatsarana inona no vita ho an'ny tonian'i Mcedit, nanomboka izao manana fanatsarana ny fanasongadinana ny syntax ho an'ny php, tcl, Cobol ary Verilog / SystemVerilog, miampy ireo dia nanampy modely manasongadina vaovao ho an'i Kotlin sy ino (Arduino IDE).
Fanatsarana lehibe iray hafa ao amin'ny Midnight Commander 4.8.25 dia ny mpitantana ny rakitra ankehitriny efa manana fanohanana ny endrika opus handefa mpamily rakitra, hoeny ary koa ny fanohanana ireo rakitra azo ampiharina manodina lha (jlha, lhasa), arj (7za), cab (7za), zip (7z), zipx (7za), iso (7za) fisie.
Etsy ankilany, nofoanana ny mifanentana amin'ny RealPlayer, gtv ary xanim nolovaina tamin'ny mpamily rakitra video (video.sh).
Ary koa ny fampandrenesana manelingelina «GNU Midnight Commander dia efa mandeha ao amin'ity terminal ity. Ho foana ny fanohanan'ny Subshell".
Amin'ireo fanovana hafa natambatra ato amin'ity kinova vaovao ity:
Nanampy fifanakalozan-kevitra an-tsary mba hanovana ny toetran'ny fisie tohanan'ny fampiasa chattr, mitovy amin'ny fomba fitantanana ny zon'ny fidirana.
Ny fanovana toetra dia tsy misy raha tsy ho an'ny rafitra fisie Ext2, Ext3, ary Ext4.
Nanome ny fahaiza-manafoana ny hitsin-dàlana amin'ny keyboard bokotra.
Nametraka widget WGroup aho izay manome kilasy fototra ho an'ireo widgets izay misy widget hafa.
Fanohanana ireo mari-pahaizana miankina amin'ny safidy azo atao ENHANCES, SUGGESTS, RECOMMENDS и SUPPLEMENTS dia nampiana tao amin'ny VFS hiara-miasa amin'ny RPM.
Finalmente raha liana hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao Momba ny famoahana an'ity kinova vaovao ity dia azonao atao ny manamarina ny antsipiriany ao amin'ny fanambaràna tany am-boalohany. Ny rohy dia ity.
Ahoana ny fametrahana ny Midnight Commander amin'ny Linux?
Ho an'ireo liana te-hametraka ny Midnight Commander amin'ny rafitr'izy ireo dia afaka manao izany amin'ny fanarahana ny torolalana zarainay etsy ambany.
Amin'izao (avy amin'ny fanoratana ny lahatsoratra) ny kinova vaovao dia mbola tsy nohavaozina ao anatin'ny trano fitehirizam-bokin'ny fizarana Linux lehibe. Ka hametrahana ilay kinova vaovao tsy azo atao raha tsy amin'ny fanangonana ny kaody loharano.
Este azon'izy ireo atao izany ity rohy manaraka ity.
Ho an'ireo izay tia miandryAzon'izy ireo atao ny mametraka ny kinova vaovao raha vantany vao misy amin'ny alàlan'ny fanoratana ireto baiko manaraka ireto, arakaraka ny fizarana Linux ampiasainy.
Ireo izay mampiasa Debian, Ubuntu na iray amin'ireo derivatives izany. Ao anaty terminal no hanoratany ireto manaraka ireto:
Ho an'ny Ubuntu sy ny derivatives ihany, dia tsy maintsy monina ao amin'ny fitoerany izao rehetra izao:
sudo add-apt-repository izao tontolo izao
E apetraho amin'ny:
sudo apt apetraka amin'ny mc
Ho an'ireo izay mampiasa Arch Linux na ny derivative sasany avy aminy:
Amin'ny tranga Fedora, RHEL, CentOS na derivatives:
sudo dnf hametraka mc
Farany, ho an'ny OpenSUSE:
sudo zypper ao amin'ny mc
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ny mamatonalina komandy 4.8.25 dia efa navotsotra ary izao ny vaovaony
iray amin'ny sasany dia hoy izy:
Phew, efa an-jato taonako no tsy nahalala momba an'ity programa ity. Noheveriny fa taloha izy.
Araka ny nolazain'izy ireo dia tsy ho faty mandrakizay ireo rockers taloha 🙂
Mamaly an'i onedetantos